Mepụta agwa gị ugbu a na Black Desert Mobile na preload | Gam akporosis
Black Desert Mobile mechara rute na gam akporo ma ugbu a maka nbudata. Ọ bụ ezie na n'oge a, anyị ga-enwe afọ ojuju naanị na okike nke agwa na ichere maka mmeghe nke sava ga-abụ echi.
All gịn MMORPG nke otutu mmadu chere Na nke ahụ bụ nzọụkwụ na-esote mgbe emechara ya maka PC afọ anọ gara aga na maka Xbox One na 2019. Adị mkpanaka nke na-atụ anya nke PS4 na nke ahụ nwere ihe niile mere ka aha a bụrụ nke a ma ama; ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na-atụ anya na anyị mobiles bụ karịa.
1 Budata Nwa Desert Mobile ugbu a
2 Mepụta agwa gị ma ọ bụ ọtụtụ
3 15 awa mgbe ihe nkesa meghere
Budata Nwa Desert Mobile ugbu a
Ọ bụghị oge mbụ ọ na-eme na mwepụta nke egwuregwu ahụ na Storelọ Ahịa Play abụghị n'otu oge dị ka oghere nke sava. N'ụzọ dị otú a, ihe a na-enweta bụ iji belata ibu na sava ahụ mgbe ha na-arụ ọrụ ma nwee ndị egwuregwu dị njikere na ihe odide ha kere.
N'ezie, ị nwere ike ibudata Black Desert Mobile ugbu a mara ndebanye aha gị gara aga maka ọnwa, na ndị ahụ dị n'okpuru 3GB nke ahụ nwere nchekwa na na mgbe ebudatara ha, ha na-enye gị ohere igwu obere egwuregwu ga-eme ka ị nweta ụgwọ ọrụ. A Obere egwuregwu na nke ị ga-enweta ihe niile Ebe e si nweta i nwere ike ma si otú zere ihe mgbochi na ị ga-ahụ na ụzọ gị.
Mgbe egwuregwu a dị obere ma budata ya, ị ga-enwe ike ịmepụta agbụrụ gị na agwa mbụ gị. N’ezie i nwere oghere 3 iji mepụta mkpụrụ edemede 3 were gabazie gbalịa klas 5 dị iche iche o nwere Black Desert Mobile na igba egbe: Warrior, Explorer, Wizard, Giant na Valkyrie
Mepụta agwa gị ma ọ bụ ọtụtụ
Ma ọ bụ ezie na ị na-eche na ọ bụghị ọtụtụ ike a agwa, ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere ihe ya kere ihuenyo na-juru n'ọnụ na atụmatụN’ezie ị ga-eji nkeji ole na ole mepụta avatar gị.
N'ezie, ọ nwere ụfọdụ atụmatụ dị egwu ma ọ bụ enwere ike jiri mmegharị ahụ mee ka akụkụ ahụ nke ọ bụla dịkwuo elu na tuo mkpịsị aka. Nke ahụ bụ, ịnwere ike pịa ụkwụ ma bulie ma ọ bụ belata ọkpụrụkpụ dịka uto gị. Nke a na - enye ohere ọsọ karịa mgbe ị na - eke agwa ahụ ma chefuo ịnwe usoro ya niile. Na eziokwu bụ na e nwere ọtụtụ.
Have nwere ụdị nhọrọ niile dị iche iche mepụta ọdịdị nke anya, belata oke nku anya, gbasaa nkuku nke egbugbere ọnụ ma ọ bụ mee ka cheekbones pụta ìhè. Black Desert Mobile na-egosi ebe a ike ya niile na otu o si emesi ike okike nke ga-anọchite anya anyị. Anyị na-akwado ka ịnwe ezigbo oge, ebe ọ bụ na ị họrọ klaasị ahụ, ị ​​ga-enwe ike ịhazi ahụ na ọdịdị anụ ahụ nke mkpụrụ edemede ọ bụla.
15 awa mgbe ihe nkesa meghere
Ugbu a ka anyị nọ 15 awa mgbe mmeghe nke ihe nkesa egwuregwu nke ahụ bụ nke ịkwụ ụgwọ iji merie na nke anyị maara site na egwuregwu ndị ọzọ. N'ebe a, ọ na-azọpụta anyị oge n'inweta ihe ahụ, yabụ na ị maraworị ihe okwu ahụ dị ntakịrị. MMORPG ebe a na-etinye ngwoolu ahụ na ịmepụta na ịnakọta ihe iji jiri ha maka ihe ọhụrụ.
Maka nzaghachi nke ndị egwuregwu gbalịrị beta, isiokwu nke ịkwụ ụgwọ ahụ bụ kama maka agwa ohere, mascot na ọ na-azọpụta oge. N'ile anya, o nwekwara isi okwu ya ma na-eche ịnwale ya, vidiyo ndị anyị nwere ike ịhụ na YouTube na-egosi na ọ nọ n'ọkwa dị elu.
N'ụzọ ezi uche dị na ya ị ga-enwe mmasị n'ebe ọwụwa anyanwụ aesthetics na na ebe a Black Desert Mobile akwusila nke na-achọ ịmalite njem ya ịghọ otu n'ime MMO kachasị atụ anya n'afọ. Anyị ga-agwa gị ihe ndị ọzọ na-esote ụbọchị na nyocha anyị.
Black ọzara mobile
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nwere ike ịmepụta agwa gị ugbu a na Black Desert Mobile tupu sava emepe echi
Google nọrọ na nke iri na atọ: ọ gaghị ewepụ ya na Fortnite ma mee ka ị gaa ọrụ 30%